Medical Writings ဆေးပညာစာများ: SII RABIVAX ခွေးရူးရောဂါကာကွယ်ဆေး
• ဘုရားဖူးသွားတဲ့သူတယောက် ဗုဒ္ဓဂယာ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးကိုက်ခံရလို့ ကာကွယ်ဆေးလာထိုးတယ်။
• အိန္ဒိယကထုတ်တဲ့ Rabies vaccine ခွေးရူးရောဂါကာကွယ်ဆေး ဖြစ်တယ်။ cell culture ဆဲလ်မွေးမြူနည်းနဲ့ ထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ ခွေး (ခွေးရူး) မကိုက်မီနဲ့ အကိုက်ခံရပြီးပါထိုးနိုင်တယ်။ ခွေးရူးရောဂါ ဗိုင်းရပ်စ် Pitman-Moore strain ကနေလုပ်ထားတယ်။ ß propiolactone နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ရောဂါမရေစေအာင်လုပ်ထားတယ်။ Aluminum Phosphate ကိုထပ်သုံးတယ်။
• အသားဆေးထိုးရမဲ့ 1 ml မှာ Rabies antigen > 2.5 I.U. ပါတယ်။
• ခွေးရုးအန္တရာယ်ရှိသူတွေအတွက် ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ခွေးရူးကိုက်ခံရတာအတွက်ပါ သုံးတယ်။
• ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုကျိုးတွေက မဆိုးပါ။ ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ နာနေတာကို ၁-၂ ရက်သာ ခံစားရမယ်။ ကိုယ်ပူတာ၊ ပျို့အန်တာ၊ မအီမသာဖြစ်တာနဲ့ ကိုက်ခဲတာတွေနည်းနည်းသာဖြစ်ကြတယ်။
• ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း = 1 ml ကို ဝ-၇-၂၈ ဖေါ်မြူလာအတိုင်း စုစုပေါင်း (၃) ခါ ထိုးတယ်။ ၁ နှစ်နေရင် တကြိမ် ထပ်ထိုးပါ။ တချို့က ၅ နှစ်နေမှသာ ထပ်ထိုးခိုင်းတယ်။
• ခွေးကိုက်ခံထားရသူတွေကိုထိုးပေးနည်း = 1 ml ကို ဝ-၃-၇-၁၄-၂၈ ဖေါ်မြူလာအတိုင်း စုစုပေါင်း (၅) ခါ ထိုးတယ်။ ၉ဝ ရက်မှာ ထပ်ထိုး၁ ကြိမ်ထိုးမယ်။
• တကယ်လို့ အရင်က ကာကွယ်ဆေးကို အပြည့်ထိုးထားသူက ၁ နှစ်အတွင်းဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးကို ဝ-၃ ဖေါ်မြူလာနဲ့ (၂) ကြိမ်၊ ထပ်ထိုးရမယ်။
• ဆိုးဝါးတဲ့ကူးစက်မှုဖြစ်သူတွေကို specific rabies immunoglobulin of human origin (HRG) 20 I.U. per kg ဒါမှမဟုတ် purified rabies, immunoglobulin of equine origin (ERIG) 40 I.U. per kg ကိုပါ ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့နေ့မှာဘဲ ထိုးရတယ်။
• တကယ်လို့ အရင်က ကာကွယ်ဆေးကို အပြည့်ထိုးထားသူက ၁ နှစ်အတွင်းဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးကို ၂ ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ် ထပ်ထိုးရမယ်။
• ခွေးကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို သန်ရှင်းဆေးကြောပါ။ ရေ + ဆပ်ပြာ + 70% alcohol အရက်ပြန်သုံးပါ။